Inona avy ireo legioma azon'ny alika | Tontolo alika
Betsaka ny legioma azon'ny alika atao. Ireo sakafo ireo dia mahavelona ary, ambonin'izany rehetra izany, mahasalama izay hanampy anao hitazona ny lanjanao mety. Saingy, eny, tsy maintsy fantatrao hoe iza no tena atolotra ho an'ny namanao ka hialana amin'ireo tsy ampoizina tsy mahafinaritra.
Ka eto dia holazainay aminao inona ny legioma no lanin'ny alika?. Aza adino izany.
1 Lisitry ny legioma azon'ny alika atao
1.1 Haricot vert
1.4 Voanjo maitso
2 Firy ny legioma azoko omena anao?
Lisitry ny legioma azon'ny alika atao
Ny tsaramaso maitso dia ambany kaloria, nefa manome rano, fibre ary vitamina ilaina koa amin'ny fitomboana tsara ny alika kely ary ny fikojakojana ny alika olon-dehibe.
Ny voatavo, izay mahazatra ny fararano, sakafo mety tsara ho an'ny alika mijaly amin'ny fitohanana. Aza misalasala manampy izany amin'ny sakafo mahazatra anao mba hanananao rafi-pandevonan-kanina mahasalama.
Ny epinara manome fibre, vitamina ary antioxidant. Ny hany lesoka dia ny tsy maintsy nandrahoina sy habetsahana izy ireo satria raha tsy izany dia mety hanimba ny alika izy ireo.
pitipoà misy manezioma, proteinina legioma ary vitamina B2, hany ka mahaliana azy ireo ilay volom-borona.
Na tapatapahina na sombintsombiny, loharano lehibe manovo rano ny kôkômbra. Inona koa, misy antioxidants sy otrikaina hafa toy ny potasioma.
Raha mbola tsy omentsika azy ny voatabia maitso na tsy matotra dia azontsika avela izy hihinana an'io sakafo io tsy misy olana.. Tsy ny alika rehetra no tia azy, fa misy ny sasany tia mihinana azy.
Ny karaoty manan-karena fibre, potasioma, calcium, magnesium ary vitamina C izy ireo. Toy ny hoe tsy ampy izany dia manana vitamina A sy antioksidan izy ireo, noho izany dia legioma izay hataon'ny alika tena tsara tokoa.
Firy ny legioma azoko omena anao?
Matetika ny isan-jaton'ny legioma tsy tokony hisolo tena mihoatra ny 10 na 15% amin'ny sakafo io. Tsy maintsy tsiahivina fa mpiompy indrindra ity biby ity, ka ny hena fa tsy ny legioma no tokony ho mpiorina lehibe amin'ny sakafony.
Fantatrao ve ny legioma azonao omena ny alikanao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fahano alika sy alika kely » Inona avy ireo legioma azon'ny alika atao?
Ahoana ny fomba hitsaboana ny biby amin'ny homeopathy